Ahoana ny fomba hananana tombony amin'ny tatitra momba ny fiovam-po AdWords vaovao | Martech Zone
Zoma, Oktobra 16, 2015 Asabotsy 4 Febroary 2017 Amanda West-Bookwalter
Fanampiana Google Ads
Iza no tianao: ny doka niomerika manintona izay manintona ny fitsidihan'ny tranonkala 1,000? Sa ilay mandeha miadana izay nahazo tsindry 12 fotsiny hatreto?
Fanontaniana fetsifetsy io. Ny valiny dia tsy.
Farafaharatsiny mba tsy hahalalanao hoe firy amin'ireo mpitsidika no niova fo.
Ny doka kendrena be indrindra izay miteraka hetsika fiovam-po am-polony am-polony dia ho avo folo heny noho ny iray manintona mpitsidika tsy mahay an-jatony izay tsy miova. Ao anatin'ny tontolo iray izay andaniam-bola ny tsindry rehetra, ny fanovana no tena ilaina. Inona moa no antony fandoavana ny dokam-barotra raha tsy miteraka fifamoivoizana mahafeno fepetra izay mety hitera-bola ho valiny?
Izany no antony ao ambadiky ny fanovana farany nataon'i Google ho an'ny editor editor drag-and-drop an'i AdWords. Vaovao tsanganana fanarahana fiovam-po omeo fanaraha-maso bebe kokoa ny mpivarotra amin'ny fampisehoana ny angona mba hahitanao izay tena mandeha.
Noho izany ...
Inona no miova amin'ny tatitra momba ny fiovam-po AdWords?
vaovao fiovam-pony misolo ny tsanganana Fiovam-po ho an'ny fanatsarana. Ity tsanganana vaovao ity dia mampiseho ny angon-drakitra ho an'ny hetsika fiovam-po rehetra miaraka amin'ny fikirana fanatsarana napetraka ho “on”.
Mandritra izany fotoana izany, an Ny fiovam-po rehetra misolo ny tsanganana Tombanana ho fanovana tanteraka. Ity tsanganana ity dia mampiseho data ho an'ny rehetra fiovam-po — na nivadika fanatsarana ianao on or eny.
Midika inona ho anao ny fanovana momba ny fanovana ny fiovan'ny fiovam-po AdWords?
Raha mahita fiovana lehibe eo amin'ny fiovam-ponao AdWords ianao dia aza matahotra. Mety mila manitsy fanovana vitsivitsy fotsiny ianao, amin'izay mifanaraka amin'ny famaritan'ny Google ny famaritana ny fiovam-pony. Hanamora kokoa ny fifantohana amin'ny fiovan'ny makroola izay ahazoam-bola ny orinasanao amin'ny farany.
Hitranga ho azy ny fanovana fitaterana ny fiovam-po, saingy misy dingana vitsivitsy tokony hataonao hiantohana ny fandefasana ny angon-drakitrao amin'ny fomba malefaka sy milamina:
Amboary ny toerana misy anao raha hiovaova ny makro sy ny micro
Raha mbola tsy nanao izany ianao dia fantaro tsara izay isa isaina a macro fiovam-po ho an'ny orinasanao. Ireo dia misy fiatraikany mivantana amin'ny fidiram-bolan'ny orinasanao ary misy ny fividianana na fikasana hividy. Ny fisoratana anarana karama, ny fisoratana anarana maimaim-poana ary ny fangatahana demo dia azo isaina ho fiovam-po.
Hiantohana ireo fiovam-po azo avy amin'ny fidiram-bola ireo hiseho amin'ny tokony ho izy fiovam-pony tsanganana, zahao ny tsirairay raha azo antoka fa napetraka ho hamarinina izy io: safidio ny fiovam-po tianao hovaina, avy eo tsindrio ny fanovana fanovana> Fanatsarana ary alao antoka fa napetrakao io on.
Toy izany koa, tokony esorinao ny fanatsarana ny fanatsarana madinika fiovam-po — toy ny fisoratana anarana amin'ny mailaka mailaka na fanarahana anao amin'ny media sosialy. Ireo fiovam-po ireo dia mbola hotaterina miaraka amin'ny fiovam-po rehetra, ao amin'ny Ny fiovam-po rehetra tsanganana.
Vaovao farany sivana.
Raha nitahiry ianao sivana manondro an'io na mampiasa fiovam-po hanaovana kajy, zahao raha mbola miasa tsara ireo. Ohatra: Raha nametraka fiovam-pozana kely ianao eny, mety mila manova sivana ianao mba hampiasa ilay tsanganana “Fiovam-po” vaovao mba tsy hisy fahatapahana amin'ny fanaovana tatitra.
Vaovao farany ny lalàna mandeha ho azy.
Raha toa ianao ka mampiasa fitsipika mandeha ho azy or tsanganana manokana hanara-maso ny fiovam-po, hamerenana ary hanavao ireo toerana napetrakao mba hahalavorary ny asany araka ny nampoizina. Averiko indray fa te hampiasa ilay vaovao ianao fiovam-pony tsanganana hiantohana ireo fitsipika ireo hitohy hiteny aminao rehefa misy doka misy ny vokany eo amin'ny orinasao. Raha mampiasa ianao soratra Raha mandeha ho azy ny asa mahazatra, tianao ny manamarina ny kaody ary miantoka izay rehetra antsoina hoe a fiovam-po novaina mba hanehoana ny fiovana.
Fehiny: ny fanovana farany nataon'i Google momba ny fanaovana tatitra amin'ny AdWords dia hanamora ny fanarahana ny angona izay manan-danja indrindra amin'ny orinasanao. Ny hany mila ataonao dia ny mandray dingana vitsivitsy haingana mba hiantohana ny tsanganana, ny sivana ary ny fitsipika natao ho fitaratra araka ny tokony ho izy ireo fanovana.
Tags: fitsipika mandeha ho azy adwordsfanovana ny dokasivana adwordsgoogle adwords
Amanda West-Bookwalter dia manam-pahaizana momba ny Digital Media Marketing ao Formstack, tompon'andraikitra amin'ny fampiharana sy fanitsiana ny paikady fanaovana dokambarotra nomerika ho an'ny orinasa teknolojia. Talohan'ny nidirany tao amin'ny ekipa Formstack, Amanda dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fitantanana kaonty ho an'ny orinasam-pitantanana pay-per-click ary niresaka tamin'ny fihaonamben'ny varotra an-tserasera marobe, toy ny HeroConf, SMX East, ary SES Denver.
5 Nov 2015 amin'ny 6:45 maraina
Misaotra ny fanavaozana Amanda. Betsaka no tena hahita an'izany. Fomba iray hafa hanarahana ny fiovana ao amin'ny Google Adwords sy sehatra an-tserasera an-tranonkala hafa ny fitadiavana fitaovana adtech afaka mampifangaro azy ireo sy http://www.TapAnalytics.com afaka manao an'izany fotsiny.